धावन मार्ग पर्याप्त नहुँदा विमान अवतरण गराउन समस्या | suryakhabar.com
Home पु.समाचार समाचार धावन मार्ग पर्याप्त नहुँदा विमान अवतरण गराउन समस्या
on: २५ बैशाख २०७५, मंगलवार १३:५२ In: समाचारTags: No Comments
चितवन । भरतपुर विमानस्थलको धावन मार्ग पर्याप्त नहुँदा ठूला विमान अवतरण गराउन समस्या भएको छ ।
विसं २०१८ मा निर्माण गरिएको विमानस्थलमा यात्रुको चाप बढ्दै गएको छ । विमानस्थलको विस्तार हुन नसक्दा समस्या भएको छ ।
धावन मार्गको पूर्वतर्फ मापदण्ड विपरीतका संरचना निर्माण भएका कारण हाल रहेको धावनमार्गको पूरै प्रयोग गर्न विमान चालकले सकिरहेका छैनन् । एक हजार २०० मिटर लामो धावनमार्गमा एक हजार मिटरमात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको चालकले बताएका छन् ।
यति एयरलाइन्स भरतपुरका प्रबन्धक राजेश सिंह कम्पनीको ३० सिट क्षमताको जेटस्टिम विमानले धावन मार्ग छोटो भएका कारण २३ जनासम्म यात्रु बोक्दै आएको बताए। अहिले प्रयोग भइरहेको धावन मार्गको अवतरण क्षेत्रमा बनाइएका संरचनाका कारण पूरै धावन मार्गको प्रयोग हुन नसक्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
“विमान कम्पनीलाई नोक्सान हुँदै आएको छ । साना विमानमा थोरै यात्रु बोक्नु पर्दा धेरै उडान गर्नुपर्ने बाध्यता छ,” उनले भने ।
बुद्ध एयरलाइन्स भरतपुरका प्रबन्धक भक्त बस्नेतले धावन मार्ग छोटो हुनु र विमान अवतरण क्षेत्रमा मापदण्ड विपरीतका संरचनाका कारण क्षमताअनुसारको यात्रु बोक्न समस्या हुने गरेको बताए । “उच्च तापक्रम र पर्याप्त धावन मार्गको अभावमा क्षमताअनुसारको यात्रु बोक्न कठिन भएको छ,” उनले भने ।
बुद्ध एयरलाइन्सले ४७ सिट क्षमताको एटिआर ४२ मार्फत उडान गर्दै आएको छ । ठूला जहाज अवतरण नहुँदा एक दिनमा ११ वटासम्म उडान गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बस्नेतको भनाइ छ । ठूला जहाज अवतरण गर्न सकिएमा थोरै उडानले सस्तो भाडादरमा सेवा दिन सकिने उनी बताउँछन् ।
काठमाडौँबाट ५० नटिकल माइल दूरीमा रहेको भरतपुर विमानस्थलमा उडान भर्दा यात्रुले रु तीन हजार ६०० भाडा तिर्न बाध्य छन् । बढ्दो शहरीकरण, हवाईचापमा वृद्धि र पर्याप्त जग्गाको अभावका कारण विमानस्थल साँघुरो बन्दै गएको भरतपुर विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख पवनकुमार गौतमले बताए। विसं २०१५ देखि सेवा शुरु गरिए पनि विधिवत् रुपमा २०१८ सालमा तत्कालीन हवाई सेवा विभागअन्तर्गत भरतपुर हवाई कार्यालय स्थापना भएको हो ।
विमानस्थलको क्षेत्र बढाउन सेनाको घोडा प्रजनन केन्द्र रहेको ब्यारेक उपयुक्त मानिएको छ । सेनाले शहरबाट २५ किलोमिटर टाढा विमानस्थल राख्न सके राम्रो हुने तर्क राख्दै आफूले प्रयोग गर्दै आएको जमिन दिन नसक्ने जवाफ दिएको गौतमले बताए ।
सेनासँग सो ठाउँमा करीब २३ बिगाहा जमिन छ । सेनाले ठाउँ दिएमा ४०० मिटर धावन मार्ग विस्तार गर्न सकिने गौतम बताउँछन् । धावन मार्ग विस्तारपछि ७५ सिट क्षमताका विमान अवतरण गराउन सकिने छ । भरतपुर विमानस्थलबाट एकतर्फी रुपमा दैनिक औसतमा ५०० यात्रुले यात्रा गर्दै आएका छन । बुद्ध एयर, यति एयर र सिम्रिक एयरले नियमित उडान भर्दै आएका छन् । यतिको जेट स्ट्रिम र बुद्ध एयरको बीचक्राफ्ट, एटिआर–४२ जस्ता आधुनिक विमानले उडान भर्ने गरेको विमानस्थलका प्रबन्धक गौतमले बताए।
अग्ला घरका रकाण विमान अवतरण र उडान प्रभावित हुँदै आएको छ । अग्ला घरकै कारण विमानले पूरा धावनमार्ग प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । धावनमार्ग २०० मिटर छोडेर विमान अवतरण गरिँदै आएको छ । साना जहाजलाई उडान र अवतरणमा ६०० देखि ८०० मिटर धावनमार्ग भए पुग्छ । ठूला जहाजलाई भने एक हजार ४०० मिटर जरुरी पर्छ । हाल धावन मार्गको लम्बाई एक हजार २०० मिटर मात्र छ । हुस्सु लागेका बेला अग्ला घरका कारण विमान अवतरण र उडानमा समस्या हुने गरेको छ ।
भरतपुर विमानस्थलको धानवमार्ग विस्तार गरी ठूला विमान अवतरण हुन सकेमा यहाँका यात्रुले सहज र सस्तो मूल्यमा यात्रा गर्न पाउने छन् । यात्रा सुरक्षित हुनेछ । मुख्य रुपमा नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरो खस्ने र विस्तारका क्रममा रहेकाले हवाई यात्रुको चाप ह्वात्तै बढेको छ ।
अमेरिकालाई च्यालेन्ज गर्ने यो देश !
सनसनीपूर्ण खुलासाः आचार्य श्रीनिवासको गोप्य डायरी जफत, यस्तो रहेछ गोली हनाउनुको रहस्य !
२५ बैशाख २०७५, मंगलवार १३:५२